သင့္ဇနီးမယားက သင့္ကို သိေစခ်င္တဲ့ လိင္ဆက္ဆံမႈ အၾကံဉာဏ္ ၁၅ ခု – Gentleman Magazine
GM ရဲ႕ တျခားေဆာင္းပါးေတြ မလြတ္တမ္းဖတ္ခ်င္တယ္ဆိုုရင္ေတာ့
မိန်းမတွေ သင့်ကို သိစေချင်တဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှု အကြံဉာဏ် ၁၅ ခု
အပြင်မှာ ရာသီဥတု အေးနေရုံနဲ့ သင့် လိင်မှုဘဝပါလိုက်အေးသွားမယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ဆောင်းတွင်းဆိုတာ သင့်ပါတနာနဲ့ နှစ်ယောက်ထံ အချိန်ဖြုန်းဖို့ အကောင်းဆုံး ရာသီပါ။ အဲဒါကြောင့် မိန်းကလေးတွေ ဘာကြိုက်တတ်လဲဆိုတာကို အရမ်းလန်းတဲ့ နှိုးဆွမှု အိုင်ဒီယာတွေကနေ ကမ္ဘာတုန်ဟီးသွားမယ့် ပြီးဆုံးမှုမျိုး ရစေဖို့ထိ အကြံကောင်းလေးတွေ ပေးလိုက်ရပါတယ်။
၁. ခံစားလွယ်တဲ့ နေရာလေးတွေကို နမ်းပေးပါ
လည်ပင်ဘေးလေးလို၊ နားရွက်လေးလို နေရာမျိုးတွေကို ဖွဖွလေး ကိုက်နမ်းပေးရင် တစ်ကိုယ်လုံး တုန်နေအောက် ကောင်းကောင်း ခံစားရပါတယ်လို့ ၂၇ နှစ်ရွယ် Tess က ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
၂. စိတ်ကြွစရာ ပြောပါ
အိပ်ရာထဲမှာတင် မဟုတ်ပဲ ညစာစားချိန်လေးလောက်ကစပြီး သူမကို မထိတထိလေး ပြောနေသင့်ပါတယ်။ Bar မှာဆို သူမတင်ပါးပေါ် လက်တင်ပြီး အိမ်ရောက်ရင် ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာ စိ်တ်ကြွစရာ ပြောပြပေးပါ။
၃. ရင်သားလေးတွေကို ဂရုပြုပါ
ဆုပ်ပြီးဆွဲခိုင်းနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ နို့သီးခေါင်းလေးတွေ ထောင်လာတဲ့ထိ နမ်းနေ၊ စုပ်နေပြီး ထောင်လာရင် ဖြည်းဖြည်းလေး ကိုက်ပေးတာမျိုးပါ။ အဲဒိအချိန်ဆို ကောင်မလေး တော်တော်ကောင်းနေလို့ အောက်ပိုင်းကို ပွတ်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ အကောင်းဆုံး ခံစားချက်တွေနဲ့ ပြီးသွားနိုင်ပါတယ်။
၄. ကိုယ့်ဘာသာ တို့ထိပါ
သင့်ကိရိယာနဲ့ သင့်ဘာသာ ကစားနေတာ ကြည့်ရတာလဲ ကောင်မျလးတွေ စိတ်ကြွစေပါတယ် တဲ့။
၅. သူမကိုလည်း အလှည့်ပေးပါ
သင်ချည်းပဲ အပေါ်မှာ မနေပဲ သူမကိုလဲ အပေါ်ကို တင်ပေးပါ။ မျက်လုံးချင်းဆုံထားပြီး သူမစိတ်ကြိုက် လုပ်ပါစေ။
နှစ်ယောက်တူတူ ရေချိုးရင်း ကစားရတာဟာ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ အရည်တွေ လွင့်ပျံလာမှာလဲ ပူစရာ မလိုပါဘူး။ ဆပ်ပြာမြှုပ်လေး နည်းနည် ထအောင် လုပ်ထားတာလဲ အဆင်ပြေပါတယ်။
၇. ကောင်မလေးတွေလဲ Porn ကြိုက်ပါတယ်
ခဏခဏ မဟုတ်ပေမယ့် သူ့ကောင်လေးနဲ့ တူတူ Porn ကြည့်ရရင် ကောင်မလေးတွေလဲ စိတ်ကြွလာတတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဇာတ်ကားနဲ့ အပြိုင် လုပ်မိတတ်ကြပါတယ်။
ကောင်မလေးက အိပ်ရာပေါ်မှာ မှောက်ထားပြီး ကောင်လေးက နောက်ကနေ ဖောက်ထွင်းရတာမျိုးပါ။ မှန်မှန်လေး လှုပ်ရှားပေးနေရင် ကျပ်ကျပ် ခံစားရပြီး နှစ်ယောက် တူတူ ပြီးသွားတတ်ပါတယ်။
အောက်ပိုင်းကို လုံးဝ အသေ ပွတ်နေမယ့်အစား ဖြည်းဖြည်းချင်း ကြည့်ပြီး စိတ်ရှည်လက်ရှည်လုပ်ပေးတာကို ကောင်မလေးတွေ သဘောကျတတ်ပါတယ်။ ပန်းဖူးလေးကို လျက်ပေးပြီး သူမပြီးတဲ့ထိ ဖြည်းဖြည်း ပွတ်ပေးတာကို ကြိုက်ကြပြီး သူမအပေါ် ဂရုစိုက်သလိုလဲ ခံစားရပါတယ်။
မနက်ပိုင်းမှာ ကိုယ့်ကောင်လေးက နောက်ကနေ Spoon ဆွဲရင်းနဲ့ နိုးထရတာ အရမ်းကောင်းပါတယ် တဲ့။ သူမရဲ့ ပေါင်လေးကို သပ်ပေးပြီး အောက်ပိုင်း ပန်းလေးကို တို့ထိမယ်။ ပြီးရင် ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ နှစ်ယောက်လုံး အကောင်းဆုံး ခံစားရပါတယ် တဲ့။
၁၁. သူမကြိုက်တာ လုပ်ပေးပါ
တချို့ကောင်မလေးတွေက လက်ကို ကြိုးနဲ့ တုပ်ထားပြီး လုပ်ရတာကို ကြိုက်ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ ပုံမှန်ချိန်ဆို ရှက်ကြပေမယ့် လိင်ဆက်ဆံချိန်ဆို သူတို့ စိတ်ကူးတွေကို ထုတ်ပြောတတ်ကြပါတယ်။ နောက်ညမှာ သူမကြိုက်တဲ့ ပုံစံအတွက် လက်ကို ချည်ဖို့ လက်ကိုင်ပဝါလေး ထုတ်ပြလိုက်ရင် သူမအရမ်းအံ့ဩပြီး ချစ်သွားမှာပါ။
၁၂. အရမ်း သက်တောင့်သက်သာ မရှိပါစေနဲ့
တချို့ကောင်မလေးတွေက ညဘက်မှ အိပ်ရာထဲမှာ သက်တောင့်သက်သာ လုပ်ရတာ ကြိုက်ပေမယ့် တချို့ကတော့ အပြင်က ပြန်လာလာခြင်း အလုပ်အဝတ်အစားတွေနဲ့ပဲ လုပ်ရတာကို Sexy ပိုကျတယ် ထင်တတ်ပါတယ်။ အဝတ်မချွတ်ပဲ စကတ်ကလေးမပြီး လုပ်တာမျိုးပေါ့။
၁၃. ကစားစရာတွေ သုံးပါ
သင့်ကောင်မလေးမှာ အဲဒါလေးတွေ ရှိရင် ထုတ်ယူပြီး သင်က သူမကို ဖြေဖျော်ပေးပါ။ နောက်ဆုံးမိနစ်မှ ကစားစရာကို ထုတ်ပြီး တကယ့် အစစ်အမှန်နဲ့ လဲလိုက်တာ အရမ်းအရသာရှိတယ် လို့ မိန်းကလေးတွေ ပြောကြပါတယ်။
69 Position ကို ဒိတ်အောက်နေပြီလို့ ပြောကြပါတယ်။ အဲဒိတော့ အဲဒါကို နည်းနည်းပြုပြင်ပြောင်းလဲ ကြရအောင်။ ကောင်မလေးက အပေါ်မှာနေလိုက်ရင် သင့်ကိရိယာက သူမပါးစပ်နဲ့ တန်းနေလို့ BJ ပေးလို့ ရတဲ့အပြင် သူမက လျှာထုတ်ပြီး သူ့ကို ထိဖို့ ကြိုးစားခိုင်းရင်လဲ ရပါတယ်။
၁၅. ရာသီဥတုကို အရမ်းမကြောက်ပါနဲ့
နွေရာသီ ပူပူကြီးမှာ ချွေးတွေသံတွေ၊ ခြင်တွေနဲ့ ဆက်ဆံရတာ စိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ် ပြောကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့လိုအချိန် လမ်းလေး လျှောက်ပြီး ချွေးလေးထွက်နေတုန်း Quickie လေးဆွဲရတာ မိုက်ပါတယ်။ လေအေးအေးထဲမှာ လုပ်ရတာ၊ ညမှောင်ချိန် သဲသောင်မှာ လုပ်ရတာတွေကလဲ Feel လာပါတယ် တဲ့။
GM ရဲ့ တခြားဆောင်းပါးတွေ မလွတ်တမ်းဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့
Previous: နည္းပညာပစၥည္းေတြနဲ႔ ခရီးသြားျခင္း
Next: တရားထိုင္ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား